Ny fampiasana Enfuvirtide amin'ny VIH, ny fatra, ny fiatraikany ary ny fampitandremana - Shangke Chemical
Ny fampiasana Enfuvirtide amin'ny tsimok'aretina, ny fatra, ny fiatraikany ary ny fampitandremana
1. Inona ny atao hoe Enfuvirtide?
2. Ny fomba fiasa Enfuvirtide?
3. Ny fampiasana Enfuvirtide amin'ny VIH
4. Ahoana ny fampiasana vovony enfuvirtide?
5. dosage Enfuvirtide?
6. Inona avy ny voka-dratsin'ny enfuvirtide?
7. Ahoana no tokony hitehirizana ny vovony enfuvirtide?
8. fikarohana sy fampiharana bebe kokoa amin'ny vovony Enfuvirtide
Enfuvirtide (159519-65-0) dia karazana peptide izay ampiasaina amin'ny tontolo ara-pitsaboana mba hisorohana ny tsimok'aretina maha-immunodeficiency ny olona (VIH) izay mety hanatsara ny sela mahasalama anao izay mety hanatsara ny fihenan'ny aretina amin'ny vatanao. Enfuvirtide na T-20 dia amidy amin'ny faritra maro eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny marika Fuzeon. Na izany aza, miankina amin'ny toerana niavianao dia mety hahita ilay fivarotana enfuvirtide eo ambanin'ny marika marika hafa ianao, fa mitovy ny tanjony rehetra.
Ny vovony Enfuvirtide (159519-65-0) dia ampiasaina miaraka amin'ireo fanafody hafa hitsaboana ny VIH, izay otrik'aretina tompon'andraikitra amin'ny fahazoana aretim-piraisan-tsaina (immunodeficiency syndrome). Tokony ho mariho koa ianao fa tsy manasitrana ny VIH ny Enfuvirtide fa manampy amin'ny fampihenana ny fiantraikany sy ny fiantraikany ao amin'ny vatanao. Ny olona maka an'io vokatra io dia mitondra fiainana salama sy salama satria miaro ny virus ny sela. Araka ny fanadihadiana, virus dia mitondra otrikaretina fotsy ao amin'ny vatanao izay tompon'andraikitra amin'ny ady amin'ny aretina. Izany no antony mahatonga ny marary ny tsimokaretina VIH amin'ny SIDA. Na izany aza, Enfuvirtide dia manampy amin'ny fiarovana ny sela mahasalama anao amin'ny fahasimbana, ka manatsara ny toe-pahasalamanao.
Ny aseta Enfuvirtide dia mampihena ny haben'ny otrikaretina ao amin'ny vatanao, izay manampy amin'ny fampitomboana ny hery fiarovana anananao. Manampy anao ny vokatra hampihena ny voka-dratsin'ny VIH toy ny otrikaretina izay mamely ny marary VIH. Rehefa maka fanafody VIH / SIDA hafa ianao dia tsara foana ny fiarahana aminy miaraka amin'i Enfuvirtide satria manampy ny zava-mahadomelina hiasa tsara sy hanatsara ny fahombiazany.
Enfuvirtide azo alaina amin'ny sehatra samy hafa saingy tokony amidy eo ambany fijerin'ny dokotera. Noho izany, alohan'ny hanombohanao maka an'io vokatra io dia alao antoka fa handeha amin'ny fizahana ara-pitsaboana ianao, ary mahazo fatra tsara avy amin'ny mpitsabo anao. Enfuvirtide acetate dia misy amin'ny Internet, ary afaka manao ny baikonao ianao amin'ny fampiononana ny tranonao na ny biraonao. Na izany aza, manaova fikarohana tsara hahalalanao ny mpanamboatra sy ny mpamatsy alohan'ny hanaovana ny baikonao. Ny vidin'ny enfuvirtide dia mety ho samy hafa miankina amin'ny mpivarotra. Betsaka ny fanafody mamitaka amin'ny tsena izay mety hanaratsy ny toe-pahasalamanao. Raha tsy fantatrao hoe aiza no hahazoana ilay fanafody, dia miresaha amin'ny dokotera aminao raha mila fanampiana fanampiny.
2. Ny mekanisma famoronana Enfuvirtide?
Araka ny voalaza terỳ aloha, Ny tsindrona Enfuvirtide dia fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana ny otrik'aretina immunodeficiency olombelona (VIH). Tsy mitombo na miketrikositra samirery ny otrikaretina, ary noho izany, izy dia manafika ireo sela vatana hampiasa ny metabolisma. Ny otrikaretina VIH dia manafika ny sela rafitry ny hery fanefitrao izay fantatra amin'ny hoe CD4 T-mpanampy lymphocytes na sela-fotsy fotsy. Ny sela dia miasa amin'ny fiadiana amin'ny aretina rehetra, miezaka ny hiditra ao amin'ny vatanao. Mandritra ny fizotry ny famerenana dia mamono sela CD4 T-mpanampy ny VIH, ary vokatr'izany, mihamalemy ny vatanao, ka tsy afaka miady amin'ny aretina eo aoriana eo. Midika izany fa voan'ny aretina marobe izay ho fantatrao ianao satria tsy afaka miady aminy ny vatanao.
Ny fomba fiasa Enfuvirtide dia miantoka fa voaaro ny sela CD4 anao amin'ny fanafihan'ny VIH. Ny vokatra dia mamatotra ny proteinina manodidina ilay viriosy, izay manampy azy hametaka ny tenany amin'ny sela CD4. Raha vao mifamatotra amin'ireto proteinina ireto ny enfuvirtide dia manakana ny VIH amin'ny fika miaraka amin'ny membrane sela CD4 anao. Marihina fa ny VIH dia tsy afaka mamerina sy mitombo ihany rehefa miditra ao amin'ny sela CD4 anao ny akora fototarazo. Noho izany, ny enfuvirtide koa dia miantoka fa tsy miteraka sy mitombo isa ilay viriosy.
izany Ny mekanika Enfuvirtide hafa noho ny fanafody manohitra ny tsimokaretina VIH rehetra eny an-tsena, izay miady amin'ny otrikaretina ihany rehefa avy namindra ny sela CD4 anao. Enfuvirtide VIH, noho izany, iray amin'ireo fanafody manohitra ny otrikaretina VIH ary azo ampiasaina hiadiana amin'ny fitomboan'ny otrikaretina rehefa nanjary tsy nahatohitra fanafody hafa. Na izany aza, azonao atao ny mbola mandray ny Enfuvirtide irery na hanao ny safidinao voalohany, dia handefa ny valiny irina. Hatramin'izao, tsy misy fanafody VIH fantatra, fa miaraka amin'ny enfuvirtide, azonao antoka ny mampidina ny otrikaretina amin'ny vatanao ary mampiadana ny fihanaky ny aretina vokatry ny otrikaretina VIH / SIDA.
Ny manam-pahaizana dia nanoro hevitra fa haka poba enfuvirtide miaraka amin'ireo fanafody anti-VIH izay manafika ny virus amin'ny fomba maro samihafa. Manampy ny peptida vovoka ho an'ny fitsaboana efa misy dia mety ho hevitra lehibe indrindra, indrindra raha toa ka nanjary tsy miankina amin'ny zava-mahadomelina ilay aretina. Ny vokatra dia voalaza fa anisan'ireo fanafody fanoherana ny tsimokaretina VIH, ary ny ankamaroan'ny marary dia efa niresaka fanafody hafa nefa tsy nahita fanatsarana. Azo omena ny olona manana tsy fandeferana amin'ny resa fanoherana ny otrikaretina hafa koa izany.
Fuzeon dia misy vovobony enfuvirtide ho akora mavitrika, izay mahatonga azy io ho fanafody mety amin'ny ady amin'ny VIH amin'ny vatanao. Fuzeon dia anisan'ireo karazana fanafody fantatra amin'ny maha-fusion inhibitor. Ny fanafody fanafody ao amin'ity vondrona ity toa an'i Fuzeon, manakana ny tsimok'aretina VIH amin'ny fampifangaroana ireo sela CD4 ary amin'ny farany dia manakana azy ireo tsy hamerina sy hitombo isa. Ny vovony peptide dia ampiasaina miaraka amin'ny zava-mahadomelina anti-HIV hafa hahazoana vokatra tsara kokoa. Araka ny voalaza etsy ambony dia miasa ny enfuvirtide amin'ny mamatotra ny proteinina izay manamora ny tsimokaretina VIH amin'ny firaisana CD4.
Io hetsika io dia tsy ahafahan'ny tsimok'aretina hiditra ao amin'ny sela fotsy ary miantraika amin'ny rafi-drindrinao. Amin'ny tranga maro, ny acfuate enfuvirtide dia natokana ho an'ny olona efa nitondra fanafody hafa, ary ny virus dia nanjary tsy nahatohitra fanafody hafa. Miresaha amin'ny dokotera anao raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba fomba mahomby amin'ny vokatra ity.
4. Ahoana ny fampiasana vovoka enfuvirtide?
Alohan'ny hanombohanao ny fanafody ity dia azonao antoka fa mamaky ny torolàlana fampiasa enfuvirtide ao anaty ravin-taratasy ao anaty fonosana ianao. Ny torolàlana dia hanome anao fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba hitantanana ny vokatra. Ny sasany Mpamatsy Enfuvirtide dia hanolotra anao amin'ny sasany amin'ireo voka-tsoa amin'ny enfuvirtide mba hahafahanao mahafantatra hoe rahoviana no hianaranao ny dokotera. Manolotra anao fampitandremana enfuvirtide ihany koa izy ireo mba ho azo antoka rehefa maka ilay zavatra.
Enfuvirtide dia vokatra tsindrona, tsy mitovy amin'ny fanafody manohitra ny VIH izay alaina am-bava. Ity vovo-dronono peptide ity dia misy molekiola be dia be potika ao amin'ny rafitra vatanao rehefa alaina am-bava ary tsy mahavita ny valiny tadiavina. Ho an'ny vovon-peptide dia alao antoka fa azonao tsara ny fiomanana na avelao ny dokotera hanao izany ho anao. Na izany aza, ny dokotera dia afaka manofana anao ny fomba fanomanana ny vovon-tsolom-bary enfuvirtide alohan'ny hanaovana ny tsindrona enfuvirtide.
Araho tsara ny dingana fanomanana rehetra rehefa manomana ny vovony enfuvirtide. Ny vovony dia tokony afangaro amin'ny rano sterile ary hodinihina maso ny vahaolana mba hahazoana antoka tsara ny fifangaroan'ilay vahaolana alohan'ny hikarakarana ny tsindrona.
Atombohy amin'ny fanesorana ny kapa flip-off amin'ny fatran'ny rano maloto mba handotoana ny tsindrona.
Fafohy moramora ny vilany tsirairay amin'ny sotron misy alikaola ary avelao mandritra ny fotoana fohy mba hahamaina ny tampony.
Ampiasao ny fitrandrahana 3ML lehibe ary alao miverina amin'ny marika 1ml eo ho eo ny plunger, avy eo atsofohy moramora amin'ny rivotra maloto ny rivotra.
Ampidiro ao anaty tavoara amin'ny alàlan'ny afovoany io.
Atsofohy ao anaty tavoara Fuzeon amin'ny sisiny ilay sivy.
Manaraka izany, atsindraho ny rano masira ary avereno hihena ao anaty vovoka Fuzeon.
Aza manozongozona ny vilany fa ampiasao ny rantsan-tananao mba handrindrana azy mandritra ny 10 segondra mba hihoarana azy.
Rehefa manomboka milentika izy dia avereno mba hanjavona tanteraka izay mety haharitra 45 minitra.
Rehefa mifangaro tanteraka, ny vahaolana dia tokony tsy ho loko, mazava, tsy misy banga, raha toa ka voadona ny vahaolana, omeo fotoana bebe kokoa hihoatra eo alohan'ny hitsindrohana ny tenanao. Rehefa miorim-paka ny vahaolana ary mazava fa afaka hitantana ny dosage ianao izao. Aza maka dosage raha mahita singa maromaro na alohan'ny mazava mazava ny vahaolana.
Ny fatra mahazatra ho an'ny olon-dehibe dia 90ml isan'andro isan'andro izay tokony alaina indroa isan'andro. Ny tsindrona dia tokony hokarakaraina amin'ny sandrinao ambony na ny faritra ambony amin'ny feny. Raha omenao zaza ny vokatra, dia holazain'ny dokotera aminao ny fatra mety sy ny fahaizan'ny fitantanana ny tsindrona. Ilaina ny manodina ny faritra tsindrona hanomezana fotoana azy ireo hahasitrana. Ampahafantaro ny dokotera anao koa raha toa ka misy fanafody aretina hafa ianao alohan'ny hanombohanao ny enfuvirtide.
Enfuvirtide tokony hasain'ny mpitsabo VIH / SIDA hanatsarana ny hery fanefitra ianao satria manakana ny otrikaretina tsy hifandray amin'ireo sela CD4 ary koa manakana azy ireo hamerina mamerina. Ny doka anefa dia hafa noho ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ny synthesis Enfuvirtide dia mitana andraikitra lehibe amin'ny ady amin'ny tsimok'aretina VIH izay niteraka fanoherana ny fanafody fanoherana ny tsimokaretina VIH.
Fatra amin'ny fangatahana
Ny fatra antitra ho an'ny olon-dehibe enfuvirtide ho an'ny tsimokaretina VIH dia 90mg isan'andro isan'andro izay tokony hasiana roa. Tokony hitantana ny tsindrona na dia ny fehin-kibo, ny sandry ambony na kibo.
Ny fatra pediatric mandritra ny 6 ka hatramin'ny 16 taona, dia 2mg isaky ny kg, ary tokony omena in-droa isan'andro ny fatra. Ny fatra farany lehibe indrindra ho an'ny ankizy amin'ity vanim-potoana ity dia 90mg isan'andro. Ho an'ireo ankizy 17 taona ary mihoatra ny fatra natolony dia 90 mg isan'andro ary tokony hizara ho fatra roa isan'andro ihany koa.
Dosie Enfuvirtide tsy ampy?
Raha adinonao ny maka ny fatran'ny SIDA enfuvirtide, raiso avy hatrany, tadidinao. Na izany aza, azonao atao ny manilika ny fatra raha efa akaiky ny fotoana hahatongavan'ireo fatra manaraka. Aza mampiasa dosage fanampiny hanamboarana ilay tsy hita; mety hitarika fiantraikany ratsy izany. Aza hadino koa ny maka ny resinao manaraka aorian'izay alohan'ny hampiasana ilay resa-bola.
Over dosage Enfuvirtide?
Raha sendra misy olana tafahoatra dia mitadiava fitsaboana haingana noho izany, satria afaka mitarika anao amin'ny voka-dratsy lehibe.
Rehefa maka acétate enfuvirtide dia aza atsindrona eo akaikin'ny lohalinao, satroka, navelanao. Aza atao ihany koa ny fitsindrohana ny fatra amin'ny poizina, ny mol, bruises na ny hoditra tsy salama. Ny fahazoana enfuvirtide dia tsy manakana anao tsy hiparitaka ilay aretina, noho izany dia miaro ny firaisana ara-nofo foana ianao, aza atao ny fizarana zavatra maranitra sy ny nify vovoka. Tandremo ny toromarika rehetra tokony hahazoanao tombony lehibe indrindra. Raha mila fanazavana fanampiny, dia miresaha amin'ny dokoteranao mba hitari-dàlana anao amin'ny fomba samihafa hisorohana ny fifindran'ny VIH.
6. Inona no vokatry ny enfuvirtide?
Enfuvirtide VIH toy ny fanafody hafa dia mety hampahafantatra anao amin'ny fiantraikany amin'ny lafiny hafa miankina amin'ny ho fihetsik'ilay fanafody amin'ny rafitry ny vatanao. Indraindray ny voka-dratsin'ny enfuvirtide dia vokatry ny overdose na fanararaotana diso. Na izany aza, misy ny vokatra sasany izay mahazatra amin'ny mpampiasa ny enfuvirtide rehetra. Ny fitehirizam-bokatra ratsy dia mety hitarika fiantraikany ratsy koa. Ny sasany iraisana Ny voka-dratsin'ny lafiny Enfuvirtide ahitana;
Lozy ny fahazotoana, mie, ny aretim-pivalanana sy fanaintainana
Fanaintainana, mamontsina na manelingelina any amin'ny faritra tsindrona
Ny hozatra sy ny fanaintainan'ny hozatra
Miezaha manatona ny dokotera avy hatrany anao mahatsapa izao fiantraikany ratsy manaraka izao;
Mikofoka manodidina ny tendanao na ny tendanao, ny aretim-pisefoana na ny fiovan'ny fadimbolana
Sintona ny areti-mifindra vaovao toy ny gliosida nivonto, wheezing na ny hatsiaka.
Rà ao anaty ranomaso
Ny fiantraikany amin'ny alàlan'ny enfuvirtide dia mety tsy mitovy amin'ny olona iray ka noho izany, aza manadino ny iray amin'izy ireo. Ampahafantaro ny dokotera anao raha tsy mihena ny fiantraikany matetika rehefa avy ela. Mba ho azo antoka rehefa maka an'io vokatra io ianao dia diniho ny torolàlana rehetra omen'ny dokotera anao.
7. Ahoana ny fomba itahirizana ny vovony enfuvirtide?
Ny vovony Enfuvirtide (159519-65-0) Ny mpanamboatra dia manondro foana ny fomba tokony itehiranao ny vokatra rehefa mampiasa azy io ary na ny fomba fanariana azy io aza. Ny vovony fitahirizana enfuvirtide natokana ho an'ny atiny dia eo amin'ny mari-pana amin'ny efitrano eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 degre Celsius. Na izany aza, raha tsy afaka mitahiry amin'ny mari-pana amin'ny efitrano ianao, dia afaka mitazona azy ho vata manodidina ny 2 hatramin'ny 8 degre Celsius. Arotsaho ihany koa ny rano sterile amin'ny hafanan'ny efitra.
Rehefa afangaro ny vahaolana enfuvirtide dia mitahiry izany ao anaty vata fampangatsiahana 2 ka hatramin'ny 8 degre Celsius. Ny vahaolana mifangaro enfuvirtide dia tokony ho raisina ao anatin'ny 24 ora. Aza ampiasaina intsony ilay akora rehefa avy lany ilay izy ary aza mividy izany rehefa simba na tsy hita ny tombo-kase. Aorian'ny fampiasana ny vovony enfuvirtide dia araho ny torolalana FDA amin'ny fomba fanariana ny kitapom-batana sy ny fanafody tsy ampiasaina.
Rehefa mividy vovony enfuvirtide amin'ny mpamatsy hafa dia ataovy azo antoka fa manao fikarohana tsara ianao hahazoana antoka fa hahazo vokatra tsara ianao, izay hiantoka anao valiny mahavariana. Na dia anarana marika Fuzeon aza ny anarana marika hoe Fuzyon dia azonao atao koa ny mahita ny vokatra amidy eo ambanin'ny anarana marika hafa. Betsaka ny mpamatsy enfuvirtide eny an-tsena, ary ianao dia tokony handeha amin'ny tsara indrindra foana. The Ny vidin'ny Enfuvirtide mety miovaova amin'ny mpivarotra iray mankany amin'ny iray hafa, aza mampiasa azy io ho antony manan-danja rehefa misafidy ny mpivarotra mety.
Na izany aza, mila ilaina ny fikarohana ara-pitsaboana sy fikarohana hafa mba hamaritana ny fampiasana enfuvirtide hafa sy ny fampiharana azy. Amin'ny maha-vokatra tsindrona matetika, mpampiasa maro no niteraka ahiahy, ary ny fikarohana fanampiny dia afaka manampy amin'ny famolavolana fatra enfuvirtide am-bava. Raha tsy izany, dia azo atao ny mamolavola ilay tsindrona mba hindrana indray mandeha na indroa isam-bolana. Amin'izao fotoana izao, ny enfuvirtide dia mijanona ho fanafody tsy azo ihodivirana ary mahery tokoa. Aza misalasala miresaka amin'ny dokotera momba ny enfuvirtide sy gp41.
Zhu, X., Zhu, Y., Ye, S., Wang, Q., Xu, W., Su, S.,… & Zhang, T. (2015). Ny fanatsarana ny fiasa sy ny rafi-pitondran-tena amin'ny fitaovam-pisefy VIH mitambatra amin'ny AP3 amin'ny enfuvirtide: manasongadina ny tombony amin'ny paikady peptida voajanahary. Tatitra siantifika, 5, 13028.
Blanco, JL, & Martinez-Picado, J. (2012). Inhibitor VIH mitohy mitondra otrikaretina amin'ireo marary efa ART. Fijery amin'izao fotoana izao amin'ny SIDA sy ny SIDA, 7(5), 415-421.
Chowdhury, S., & Roy, PK (2016). Ny modely matematika an'ny enfuvirtide sy ny inhibitor protease ho fitsaboana mitambatra amin'ny tsimokaretina VIH. International Journal of Nonlinear science and Numerical Simulation, 17(6), 259-275.
Ny mombamomba ny leuprorelin acetate lafiny vokatry, fatra